I-OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) -I-WAND YOMGICI YOBOMI BAKHO
Ikhaya > I-Oleoylethanolamide (i-OEA) -Ingqumbo Yomlingo Yobomi Bakho
Ngabantu abaya besazi ngakumbi ngezibonelelo ze I-Oleoylethanolamide (OEA), ibango leOleoylethanolamide (OEA) izongezo zonyuke kakhulu kwintengiso. Oku kukhokelele kwiinkampani ezenza imveliso ezikhuphisana ukuba zivelise izongezo ezikumgangatho ophezulu ukuze zithathe inxaxheba kwimarike. Ukuba ungumcebisi wezempilo ocwangcisela ukufaka i-Oleoylethanolamide (OEA) kwimarike yokuxhasa, kufuneka uqinisekise ukuba ufumana olona mgangatho uphezulu weOleoylethanolamide (OEA) powder. Ukufunxa izinto ezikumgangatho olungileyo linyathelo lokuqala lokuqinisekisa impumelelo yalo naliphi na ishishini. ICofttek ngumthengisi oqeqeshiweyo weOleoylethanolamide (OEA) othengisa iimveliso ezisebenzayo kule ntengiso ngaphezulu kweminyaka eli-10.
I-Oleoylethanolamide yenziwe ngamagama amathathu: i-oleoyl, i-ethanol kunye ne-amide. Ukuze kube lula kuthi, siyithumela kwi-OEA ngokufutshane. Kukwaziwa nangokuthi yi-oleothanolamine.
Yindalo ye-ethanolamide lipid esebenza njengomlawuli malunga nenkqubo yokondla kunye nobunzima bomzimba kuzo zonke iintlobo zezilwanyana ezinomqolo. Yimetabolite ye-oleic acid eyakhiwe emathunjini amancinci emzimbeni womntu. Iqhotyoshelwe kwi-PPAR Alpha receptor enceda ukulawula izinto ezine: indlala, amanqatha omzimba, icholesterol kunye nobunzima. I-PPAR Alpha ithetha ukuba iPeroxism Proliferator-activated Receptor Alpha.
Ukusetyenziswa kwe-OEA kusebenze ngendlela ecwangcisiweyo. Okokuqala, yonyusa umsantsa ngexesha phakathi kwesidlo esinye ukuya kwisidlo esilandelayo. Okwesibini, iyanceda ekunciphiseni ukuhla nokujikeleza kwe-circadian. Okwesithathu, ilawulwa zizakha-mzimba ezikhoyo.
Iziphumo zokusebenza kwe-OEA kunye nezinto ezixhamlayo zafunyanwa kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo. Kwakungekho uphando olunzulu nolucwangcisiweyo malunga ne-OEA ngaphambi konyaka ka-2001. Ngabaphandi abavela eSpain abaqala ukufunda nge-OEA, bavavanywa kwiigundane ukuze bafumane iziphumo. Uphononongo luthi i-OEA ayinasiphumo sibi ebuchotsheni kodwa inokutshintsha indlela otya ngayo kwaye inefuthe kwindlela yokuziphatha yendlala.
I-molecular formula yiC2OH39NO2. Inombolo ye-CAS eyahlukileyo ngu-111-58-0. I-OEA yindibaniselwano ye-oleic acid kunye ne-ethanolamine. Phambi kwamafutha atyebileyo akhoyo kwinxalenye ephezulu yamathumbu amancinci emzimbeni wethu yindawo apho kwenziwa khona la malungu mabini. I-OEA ifana kakhulu kwaye iyafana ne-endocannabinoid anandamide kodwa kungcono ngakumbi.
Ubungakanani be-OEA ingathathwa ngeendlela ezimbini ngokusekwe kwiingcebiso zikagqirha:
I-OEA ithathe ngaphandle kokunye ukuncitshiswa kobunzima
Ukuba i-OEA capsule ithathwa ngaphandle kokuncitshiswa kobunzima, unokufumana i-OEA capsule eyi-1mg.
I-OEA ithathe nolunye uncedo lokunciphisa ubunzima
Ukuba i-OEA capsule ithathiwe kunye nolunye unciphiso lokunciphisa ubunzima unokuthatha i-1 OEA capsule ye-100 mg ukuya kwi-150 mg.
Umntu kufuneka athathe i-OEA capsule imizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokutya. Oku kuyakukugcina woneliseka ngakumbi ngelixa usitya kwaye ke uyakugcina utya inani elincinci lokutya.
Ngaphezu koko, unokunyusa okanye unciphise inqanaba ledosi yemihla ngemihla ye-OEA ngokusekwe kubunzima bomzimba wakho. Masithi, umntu onobunzima be-150 lb uthatha i-OEA capsule ye-100mg. Kodwa ukuba umntu unobunzima be-250 lb, angathatha i-OEA capsule ye-180 mg.
Thenga i-Oleoylethanolamide (OEA) powder ngobuninzi
Unokubeka i-odolo kwi-Intanethi ngokuthengwa komgubo ngobuninzi okanye ungathenga nakwiivenkile zasekuhlaleni ezidumileyo. Ukugcinwa kulula kakhulu kwimeko ye-OEA powder. Kuya kufuneka uyigcine kubushushu begumbi. Kodwa, akufuneki idibane nokufuma okanye imitha yelanga ethe ngqo. Ke, kuya kufuneka uyigcine ivalwe ngokuqinileyo endaweni epholileyo neyomileyo.
Ukusetyenziswa kwe-OEA kunokukunceda ngeendlela ezininzi! Ngesi sizathu, kunconyelwa wonke umntu kuba ayinaziphumo zibi. Inokude ikhuthaze indlela yokuphila esempilweni kusapho lwakho ikwenze ukhule kwaye ukhanyise imilo, isitayile, kunye nokuzithemba nokuzithemba. Ukugcina nokugcina umzimba ukwimo entle, ngakumbi kwabo batyebe kancinci, ayizukukwenza uzive wonwabile kuphela kodwa iya kwenza nabanye ukuba bonwabe kwaye bazingce ngawe.
I-OEA iyakukunceda ukhuphe uxinzelelo lwengqondo ikuncede wenze umbono oqinisekileyo ezingqondweni zabanye. Ke, endaweni yokuziva ukhathazekile kwaye ungonwabanga, lixesha eliphezulu lokuba uthathe isenzo kwaye uqale ukusebenzisa i-OEA kwaye uya kumangaliswa kakhulu kukubona amandla ayo omlingo kwaye uya kuziva uphilile kwaye ucinezelwe.
Ukusebenza kweOleoylethanolamide (oea)
I-OEA okanye iOleoylethanolamide sisiyobisi esikunceda ukulawula ubunzima, ukutya, kunye necholesterol. Yimetabolite yendalo. Ilawula amanqatha omzimba wakho ngokwandisa imetabolism yamanqatha akhoyo emzimbeni wakho. Isebenza ngendlela enomdla kakhulu.
Njengokuba usitya ukutya, eli chiza liya kuthumela umqondiso kwingqondo yakho likucela ukuba uyeke ukutya okanye uthathe okunye ukutya njengoko umzimba wakho sele uthathe ukutya okwaneleyo kwaye awusafuneki. Ngaloo ndlela, uya kuqala ukuziva ukuba ugcwele kwaye ke uyeke ukutya. Ke, ngokuthe ngcembe uyaqhubeka nokuthatha ubuninzi bokutya ixesha ngalinye rhoqo. Ke, ekuhambeni kwexesha, unako ukunciphisa ubunzima obukhulu.
Ukwehla kwenqanaba le-ghrelin
IGhrelin yihomoni efumaneka emzimbeni wethu evuselela umdla wokutya. Kufunyenwe ukuba i-OEA iyanceda ukunciphisa eli nqanaba lehomoni emzimbeni wethu ukuba le OEA ilawulwa.
2.Iyanciphisa amanqatha omzimba kwizinga elonyukayo
Le naliti ifunyenwe isebenza ngokukuko ekunciphiseni amanqatha omzimba kwaye nawo kwinqanaba elandayo. Iyonyusa ifuthe lemetabolism ye-mitochondria. Icutha nokutya ukutya ngendlela efanelekileyo kwaye inyusa nenqanaba lamandla emzimbeni wakho.
3.Igcina inqanaba lepeptide yy liphantsi
I-Peptide YY yincindi yedlala evuselela umdla wokutya. Inaliti ye-OEA ukuba ithathiwe iya kunceda ukunciphisa kunye nokugcina inqanaba le-Peptide YY inqanaba lehomoni liphantsi.
I-4 inceda ukulawula ukutya
Ukuthatha inaliti ye-OEA kuya kunceda ukulawula ukutya ngokunciphisa indawo enamafutha emzimbeni wethu. Ikwonyusa ukutshiswa kwamafutha aqokelelene emzimbeni wethu. Njengokuba usitya ukutya, i-OEA iqala ukusebenza. Iphakamisa inqanaba lokusebenza kwayo kwaye kwangaxeshanye inciphisa inqanaba lokutya ngokuthumela imiqondiso kwingqondo kwaye ikwazise ukuba wanelisekile kwaye awufuni kutya.
Akukho ziphumo ebezingalindelekanga
Emva kokuphononongwa kwe-OEA, kuye kwafunyaniswa ukuba akukho mntu ukhe wajongana neziphumo ebezingalindelekanga emva kokuyifaka emzimbeni. I-OEA yi-oleic acid ethathwa njengenxalenye yokutya okusempilweni kunye nokutya okunesondlo.
6.Iziphumo ezilungileyo koxinzelelo
I-OEA ichaphazela ngokuqinisekileyo uxinzelelo. Ukufakwa kwe-OEA kunceda ukugcina ingqondo yakho ikhululekile kuxinzelelo kwaye ke inceda ekugcineni izifo ezinengxaki yokuxhalaba.
Zimbini iintlobo zecholesterol emzimbeni wethu. Zizo- i-LDL Cholesterol kunye ne-HDL Cholesterol. I-LDL yi-cholesterol embi kwaye i-HDL yi-cholesterol efanelekileyo. Ukungeniswa kwe-OEA kunceda ukunciphisa i-LDL Cholesterol kunye nokunyusa i-HDL Cholesterol.
8.Aids ekwakheni umzimba
Ukwakha umzimba wakho ukwimo efanelekileyo kunye nolwakhiwo kwaye ngokulandelelana yenye yeefashoni zakutshanje kwihlabathi lanamhlanje. Ingakumbi kwimveliso yefashoni okanye yolonwabo kumzimba womzimba ifunwa kakhulu. Ukungeniswa kwe-OEA kukwaluncedo ekwakheni umzimba njengoko wehlisa amanqatha emzimbeni wakho.
Umthengisi wezinto ezibonakalayo zeOleoylethanolamide (OEA)
Umntu unokuthenga iyeza le-OEA kwivenkile ethengisa iziyobisi eyaziwayo efumaneka kufutshane nendawo ohlala kuyo okanye unokuyithenga ngoku-odola kwi-Intanethi. Kodwa umntu kufuneka alumke kakhulu kule nkalo njengoko bonke abathengisi beli chiza bengenakuba yinyani.
Ke, soloko ujonga igama kunye nobuchule be- kwiivenkile zeziyobisi ezikwi-intanethi kwaye ngenxa yoko, kusoloko kuyacetyiswa ukuba ugqithe kwiinkcukacha zokuphononongwa kwabathengi abanamava. Qiniseka malunga nokupakishwa kwemveliso ngokungathi itywinwe ngokufanelekileyo okanye ayiphephi naluphi na uhlobo lokungcola olunokubangela imicimbi ethile eyingozi ngaphambili kwezempilo.
Oleoylethanolamide (oea) ngohlobo lomgubo
I-OEA kwimeko yayo yoqobo ayifumaneki ngohlobo lweepilisi okanye zeepilisi. Nangona kunjalo, unako thenga i-OEA powder ngobuninzikwimarike ukuba iyafuneka. Le fomu yomgubo ibandakanyiwe kugqityiwe imveliso ngokumisela rhoqo kwi-15% ye-OEA okanye i-50% ye-OEA oleic acid. Isicwangciso seCima OEA sigcinwa phakathi kwe-90% ukuya kwi-95% ngakumbi phakathi kwabathengi baseYurophu naseMelika.
(1).UPi-Sunyer FX, uAronne LJ, uHeshmati HM, uDevin J, uRosenstock J. Iziphumo ze-rimonabant, i-cannabinoid-1 receptor blocker, kubunzima kunye nomngcipheko we-cardiometabolic kwizigulana ezityebileyo okanye ezityebileyo: I-RIO-North America: ityala elilawulwa ngokungahleliwe. Ijenali yoMbutho Wezonyango waseMelika. 2006; 295 (7): 761-775.
(2).UGiuseppe Astarita; UBryan C. Rourke; UJohnnie B. Andersen; Jin Fu; UJanet H. Kim; UAlbert F. Bennett; UJames W. Hicks kunye noDaniele Piomelli (2005-12-22). "Ukunyuka kwepostprandial kwe-oleoylethanolamine yokugaya amathumbu amancinci emathunjini aseBurma (Python molurus)". NdinguJ J Physiol Regul eDibeneyo yokuHlanganisa iPhysical. 290 (5): R1407 – R1412.
ISarro-Ramirez A, Sanchez-Lopez D, Tejeda-Padron A, Frias C, Zaldivar-Rae J, Murillo-Rodriguez E.Iimolekyuli zobuchopho kunye nomdla wokutya: imeko ye-oleoylethanolamide. IiNkqubo zeeNervous System zeArhente zeKhemistri. Ngo-3; 2013 (13): 1-88.
(4).Uhambo lokujonga umz
(5).I-Anandamide vs cbd: yeyiphi engcono kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi ngabo!
(6).Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-nicotinamide riboside chloride.
(7).Izongezo zeMagnesium l-threonate: izibonelelo, idosi, kunye neziphumo ebezingalindelekanga.
(8).Palmitoylethanolamide (ertyisi): izibonelelo, idosi, ukusetyenziswa, isongezelelo.
(9).Izibonelelo zezempilo ezi-6 eziphezulu ze-resveratrol supplements.
(10).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(11).Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(12).Olona hlobo longezelelekileyo lwe-alpha gpc.
(13).Olona nyango lulungileyo lokuguga lwenicotinamide mononucleotide (nmn).
Uphononongo lwamva nje luqinisekisile ukuba i-OEA ngumchasi we-TRVP1. Kubonakalisiwe ukuba i-OEA ineziphumo eziluncedo kwimpilo ngokuphembelela ulawulo lokutya, i-lipid beta-oxidation, ukunciphisa umzimba kunye nefuthe le-analgesic. Uphando lwendlela yokusebenza lubonakalise ukuba i-OEA isebenze i-PPAR-alpha kwaye ivuselele i-vagal nerve nge-capsaicin receptor TRPV1. Izifundo zaphambi kweklinikhi zibonise ukuba i-OEA ihlala isebenza xa ilawulwa ngomlomo.
Kutshanje bendisebenzisa i-OEA (oleoylethanolamide) ngakumbi eyenye i-PPARa agonist, kodwa yona iyinto yokwanela kwendalo. Ukuyisebenzisa ekudleni nasekunciphiseni ubunzima bayo ngenxa yokuba isitshisi esinamafutha esincinci kunye nesinqandi sokutya esingathandekiyo. Ngelishwa yinto yayo enye okanye enye enokubakho kwiziphumo ezibonakalayo.